बुद्धको सन्देश विश्व समुदायलाई बुझाएँ : प्रधानमन्त्री – Online Nuwakot
गृहपृष्ठ ∕ देश ∕ बुद्धको सन्देश विश्व समुदायलाई बुझाएँ : प्रधानमन्त्री
अनलाइन नुवाकोट वैशाख ३० २०७६, सोमबार १०:२५
३० वैशाख, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भियतनाम पुगेर बुद्ध सन्देशको सान्दर्भिकताबारे विश्व समुदायलाई जानकारी दिएको बताएका छन् । साथै उनले कूटनीतिक र आर्थिक हिसाबले पनि भियतनाम भ्रमण फलदायी भएको दाबी गरेका छन् । भ्रमणका क्रममा आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र अन्य बहुपक्षीय विषयमा छलफल भएको र यसले व्यापार विस्तार हुने विश्वास प्रधानमन्त्रीको छ ।
भ्रमणको उपलब्धिबारे राससले गरेको कुराकानीः
प्रधानमन्त्रीज्यू, भियतनामको भ्रमण समग्रमा कस्तो रह्यो?
भियतनाम भ्रमणको दुई उद्देश्य थियो । पहिलो औपचारिक भेटघाट तथा छलफल । दोस्रो, ११२ राष्ट्रका प्रतिनिधिलाई बुद्धको जन्मस्थलको प्रतिनिधिको हैसियतले बुद्धका विचार, आदर्श र आजको दिनमा त्यसको सान्दर्भिकताको बारे विश्व समूदायलाई जानकारी दिनु थियो । यी दुवै सन्दर्भबाट यो भ्रमण सफल र सार्थक रह्यो ।
भ्रमणले अब नेपाल र भियतनामबीच कूटनीतिक र व्यापारिक सम्बन्धलाई अगाडि बढाउन कतिको सफल र सहज रहँला ?
अवश्य पनि, हामी हाम्राजस्ता समानता भएका देशसँग सहकार्य र एकता अगाडि बढाउँछौं। हिजोका दिनमा हामीले असंलग्न आन्दोलनलाई निकै मजबुत बनाएका थियौं । अब फेरि यस्ता सामयिक मुद्दा सशक्तरूपले अगाडि बढाउनुपर्ने छ ।
यो भ्रमणको सिलसिलामा केही दुई पक्षीय सम्झौता भएका छन् । अब यसको कार्यान्वयन पक्ष कस्तो रहँला ?
यी सम्झौता छिट्टै कार्यान्वयनमा आउँछन् । यसका लागि परराष्ट्र सचिवस्तरको संयन्त्र बनेको छ । यसले आजबाटै काम शुरु गरेको छ ।
क्याटेगोरी : देश, राजनीति, रासस, समाचार